Pnpkhabar.com | Nepali Online News, Videos & Entertainment प्रधानमन्त्रीज्यू संसद् भङ्ग गर्ने बाटोमा नगइदिनुस् : प्रदीप गिरी - Pnpkhabar.com
प्रधानमन्त्रीज्यू संसद् भङ्ग गर्ने बाटोमा नगइदिनुस् : प्रदीप गिरी
काठमाडौं, ३० चैत : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप गिरीले दोस्रो पटक पनि संसद् भङ्ग गर्ने बाटोमा अघि नबढ्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद गिरीले सकुनीले जसरी दोस्रो पटक पासा फाल्ने काम नगर्न प्रधामन्त्रीलाई आग्रह गरेका हुन् ।
उनले सकुनीले जस्तो दोस्रो पटक पासा फ्याँकेर संसद् विघटन गर्ने दिशामा अघि नबढ्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिए । गिरीले संसद्लाई पूरा कार्यकाल काम गर्न दिने अवस्था सिर्जना गर्न आग्रह गरे । उनले राष्ट्रिय नीतिलाई आफ्नो तजबीजको कुरा नमानिकन संसद्का प्रत्येक पार्टीले उठाएका र नागरिक समाजले उठाएका ज्वलन्त सवाललाई सम्बोधन गरी नयाँ उचाइ प्राप्त गर्न पनि सुझाव दिए ।
उनले भने, ‘जालझेल गरेर सकुनीले पासा फ्याँके जस्तो गरेर, दुवारा पासा फ्याँकेर, सकुनीले दुई पटक पासा फ्याँकेका थिए । एक पटकको पासालाई द्रौपदीको प्रतिउत्तर निरस्त्र गरेको थियो । दुवारा पासा फ्याँकेर फेरि पाण्डवलाई जङ्गल पठाए जस्तो संसद् विघटन गर्ने दिशामा कृपया नगइदिनोस् ।’
व्यवस्था र व्यक्ति फरक कुरा भएको भन्दै व्यवस्थामा भएका त्रुटिलाई व्यक्तिले सही नियतका साथ परिष्कार र परिमार्जन गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीले संसद् नै भङ्ग गरेको सांसद गिरीले टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘म मेरै गोरुको बाह्रै टक्का भन्ने पक्षमा छैन तर मलाई शङ्का छ हाम्रा शीर्षस्थ मानिस, देशका सबैभन्दा प्रभावशाली मानिस, देशको सबैभन्दा बलियो मानिस, (प्रधानमन्त्री भन्न चाहन्नँ भन्दै हुनुहुन्छ कि मै ठिक छु, मेरा कुरा सबै तिमीहरूले मान ।’
शनिबार काठमाडौंमा आयोजित नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको ५५औँ वार्षिक साधारण सभा तथा उद्योग वाणिज्य दिवसको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्को अङ्क गणितलाई आफ्नो स्वार्थ अनुकूल प्रयोग गर्न खोजिए ‘सकुनीका गोटी’ नै फ्याँक्ने बताएका थिए । ओलीले ‘संसद्को अङ्क गणितलाई वरपर पार्न खोज्ने खालका सकुनीका गोटी पनि फ्याँकिने छन् । गोटी नै फ्याँकिदिएपछि सकुनीले के लडाउँछ ?’ भनेका थिए ।
सभामुखलाई समेत विश्वासमा लिन नसकेको भन्दै सांसद गिरीले विभिन्न समयमा र परिस्थितिका राजनीतिक असन्तुष्टिहरू थपिँदै आएर चरम राजनीतिक सङ्कटको रूपमा देखापरेको टिप्पणी गरे । अरूलाई दोषारोपण गर्नुभन्दा आफै भित्र चिन्तन गरेर सङ्कटको घडीमा सबै एक भएर राष्ट्रिय सहमतिका साथ अघि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । म मेरै गोरुको बाह्रै टक्का भन्ने अडानबाट पछि हटेर सबै विकल्पहरूमा गम्भीर छलफल र परामर्श गरी चुनावमा जाने भए पनि राष्ट्रिय सहमतिको चुनावी सरकार बनाउन लाग्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
उनले भने, ‘यो सङ्कट एकदिनमा आएको होइन सङ्कट क्रमशः आएका छन् र म विनम्रतापूर्वक आह्वान गर्दछु । मुख्यतः प्रधानमन्त्रीका कारण आएका छन् । दिनप्रतिदिनको विवाद, दिन प्रतिदिनको भ्रष्टाचारको कथा हाम्रो संसद्को भनाभनबाट जुहारीबाट हल हुँदैन । हामी जुहारीमा व्यस्त छौँ । आम नागरिकको, कर्मचारीको, महिलाको, दलितको, महँगीको दुःखमा हामीले सम्बोधन गरेका छैनौँ । त्यसैले भावुक भएर म भन्दैछु- आज देशलाई यो अवस्थामा पुर्‍याउनका लागि म दोषी छु । संसद्का हामी सबै दोषी छौँ । ठण्डा दिमागले हामी सबैले एक किन हामी यहाँ आइपुग्यौँ ? किन ४७ सालको संविधान असफल भयो ? अब हामी यस पटक अर्को बाटो जान चाहन्छौँ भने को जिम्मेदार छ ? जिम्मेदार खोजिन्छ ।’ सांसद गिरीले २०४७ सालको जस्तो संविधान वा चुच्चे नक्सा जस्तो अवस्था संविधानको नबनाउन ध्यानाकर्षण गराए ।